မလေးရှားတွင် ရေမြောင်းထဲမှ ဧရာမ မီချောင်းကြီးအား ဖမ်းဆီးရမိ – CharTake
chartake | November 12, 2020 | International News | No Comments
မလေးရှားနိုင်ငံ Borneo ပြည်နယ် Sarawak ခရိုင်မြို့ရှိစာသင်ကျောင်းနောက်မှ တူးမြောင်းထဲတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ ညက မိကျောင်း တစ်ကောင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းပေးပို့ လာသဖြင့် သစ်တောအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ အချိန် ၁၀ နာရီအကြာ ဖမ်းဆီးကာ ဘက်ဟိုးဖြင့် သယ်ဆောင် သွားခဲ့ကြရသည် ။
မိကျောင်း ၏အလေးချိန်မှာ ကီလို ၈၀၀ အလေးချိန်ရှိပြီး အရှည် ( ၄. ၅ ) မီတာ ရှည်သည်ဟု သိရှိရသည် ။ မလေးရှားနိုင်ငံ ဘော်နီယိုနှင့် အင်ဒိုဘက်နီးရှားဘက်ရှိ သဘာဝ မိကျောင်းများ မကြာခ ဏ ယခုလို လွတ်ထွက်လာပြီး တစ်ခါတစ်ရံ လူအများကိုအန္တရာယ် ပြုသည့်အပြင် လူကိုကိုက်စားသည့် မိကျောင်းများလည်းရှိခဲ့ဖူးပါသည် ။ Source ; SiThuMaung
Unicode … မလေးရးတှငျ ရမွေောငျးထဲမ ဧရာမ မီခြောငျးကွီးအား ဖမျးဆီးရမိ
မလေးရားနိုငျငံ Borneo ပွညျနယျ Sarawak ခရိုငျမွို့ရစာသငျကြောငျးနောကျမ တူးမွောငျးထဲတှငျ နိုဝငျဘာလ ၁၀ ရကျနေ့ ညက မိကြောငျး တဈကောငျ ရောကျရနကွေောငျး သတငျးပေးပို့ လာသဖွငျ့ သဈတောအဖှဲ့နငျ့ တာဝနျရသူမြားမ အခြိနျ ၁၀ နာရီအကွာ ဖမျးဆီးကာ ဘကျဟိုးဖွငျ့ သယျဆောငျ သှားခဲ့ကွရသညျ ။
မိကြောငျး ၏အလေးခြိနျမာ ကီလို ၈၀၀ အလေးခြိနျရပွီး အရညျ ( ၄. ၅ ) မီတာ ရညျသညျဟု သိရရသညျ ။ မလေးရနိုငျငံ ဘျောနီယိုနငျ့ အငျဒိုဘကျနီးရားဘကျရ သဘာဝ မိကြောငျးမြား မကွာခ ဏ ယခုလို လှတျထှကျလာပွီး တဈခါတဈရံ လူအမြားကိုအန်တရာယျ ပွုသညျ့အပွငျ လူကိုကိုကျစားသညျ့ မိကြောငျးမြားလညျးရခဲ့ဖူးပါသညျ ။ Source ; SiThuMaung